jeudi, 10 mars 2016 16:08
RN44 – Tetezan’i Bekatsaka : Lasa fihariana kely ho an’ny mponina
Niteraka fidiram-bola ho an’ireo mponina mipetraka manamorona ny tetezan’i Bekatsaka amin’ny lalam-pirenena ny fahasimban’ilay tetezana. Eo anelanelana ny 2000 Ariary hatramin’ny 10.000 Ariary ny vola aloan’ny fiara iray miampita amin’ny tetezan-kazo namboarin’ny Fokonolona. Mbola somary taraiky rahateo ny fandraisan’andraikitr’ilay orinasa nahazo ny tolobidin’ny fanamboarana azy ka vao maika mahazo vahana ireo olona mivelona amin’ny fampitana fiara amin’izany tetezana izany.
jeudi, 10 mars 2016 12:05
Vaksiny Polio : Mitohy ny fanentanana
Notontosaina omaly maraina tetsy amin'ny DLC Anosy ny hetsika fanamafisana ny andron'ny vaksiny POLIO.
jeudi, 10 mars 2016 12:04
Mbola misy ankehitriny ireny efitrano fijerena vidéo eny anelakelatrano, izay ahitana karazan'olona maro mpankafia. Matetika dia olona tsy an'asa no manary dia anatin'izy ireny. Ao kosa anefa no tena miala voly tanteraka.
mercredi, 09 mars 2016 16:58
Polisy iray ndeha hody voaendaka, vaky loha ; jiolahy mpanendaka iray maty voatifitra.
mercredi, 09 mars 2016 14:10
8 mars Ambovombe Androy
Nankalaza ny andro iraisam-pirenena momba ny vehivavy ry zareo tany Ambovombe Androy na dia eo aza ny fahasahiranan'ny faritra manoloana ny Kere.Nandray anjara mavitrika tamin'izany ireo Vehivavy miaradia amin'i Filoha Andry Rajoelina sy ireo mivondrona ao amin'ny Reny mirailahatse.Tsy adinon'ny fokonolona any tokoa mantsy ireo tolo-tanana fanampiana nomeny niaraka tamin'ny Solombavambahoaka Jean Michel izay mbola mitety ireo fokontany mitondra ny vonjy aina avy amin'i Filoha Andry Rajoelina.
mercredi, 09 mars 2016 09:59
Anosizato : Nanolotanana ireo vehivavy miasa tena ny Pro ANR
Nizara fitaovana ho entina miavotra amin’ny fiainana toy ny koveta, sns ho an’ireo vehivavy miasa tena nefa sahirana mitady isan'andro ny fikambanana Pro ANR miaradia amin’ny filohan’ny tetezamita Andry Rajoelina, nanamarihana ny 08 marsa, Andron'ny vehivavy. Ny mpandrindra nasionaly, Ramatoa Lalao Raouni sy ny Sekretera Jeneralin’ny fikambanana, Luciano sy ireo birao foibe Pro ANR no nitarika ny hetsika teny Anosizato Ikopa androany. Ezaka manokana avy amin’ny latsakemboky ny mpikambana no namatsiana ny asa sosialy teo anivon'ny Pro ANR, izay fikambanana efa misandrahaka manerana ny Nosy sady mahasarika mpikambana maro be.
mardi, 08 mars 2016 14:15
8 marsa : Terena ho manga ny lanitra
Samy nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny faritra maro manerana ny nosy. Ny nampiavaka azy tamin'ity, raha hatrizay dia fanehoana ny fahalalahan'ny vehivavy na amin'ny sehatra politika aza, fa ity fitondran'i Rajaonarimampianina ity kosa dia tsy manaiky izany fahalalahana izany fa dia terena hiakanjo manga na fotsy avokoa ny vehivavy malagasy rehetra, ary norarana mihitsy aza, toy ny hita tany amin'ny faritra Antsohihy, Mahajanga ary Antsiranana, ny fitondrana ny ankanjo volomboasary misy ny sarin'i Filoha Andry Rajoelina, fa ny soram-baventy HVM ihany no azo arantiranty.
Fisantarana ny fankalazana ny Taom-baovao malagasy
lundi, 07 mars 2016 22:17
Nosantarina anio tetsy amin'ny Tahala Rarihasina ny fankalazana ny Taom-baovao malagasy, satria tokoa mantsy ny alarobia hifoha alakamisy amin'ny 4 ora sy 50 minitra ny Tsinanambolana, ka ny alakamisy izao ny fankalazana ny Taom-baovao malagasy.
lundi, 07 mars 2016 14:07
Mpamily fiara karetsaka iray nosakanan'ny polisy rehefa nangataka lalana. Notakian'ny polisy ny taratasy saingy tsy nety nanome ilay mpamily. Tezitra ny polisy dia nofatorany tamin'ny "menottes" ity farany. Gaga ny nanatri-maso, nampitoviana tamin'ny mpangalatra ilay mpamily. Endrika ivelany hisehoan'ny tsy mahatoa teny ny polisy intsony izao toe-javatra izao satria dia efa leo ny fanaparam-pahefana sy ny tsolotra takian'ny polisy ny mpitatitra, hany ka lasa mamaly polisy, ary ny polisy koa dia mampiatra ny fahefana ananany satria mamaly ilay olona.
lundi, 07 mars 2016 13:40
Tezitra ny mponina raha nahita ny kianja nofefena ny alin'ny alahady. Tsy niandry ela izy ireo naka ny vy sy hazo namefena ny kianja ny maraina teo.